Shiinaha Benzocaine warshad iyo soosaarayaasha | Guanlang
Benzocaine (Benzocaina) waa muraayad cad oo cadaan ah (CAS No.: 94-09-7, qaaciddada molecular: C9H11NO2, culeyska molikiyuulka: 165), barta dhalaalaysa ee 90-92 ° C, xoogaa ku milma biyaha, dareeraha Organic-ka milma
Benzocaine, sidoo kale loo yaqaan Anaesthesine, waa magaca sayniska ee ethyl aminobenzoate.
Boodhadh aan lahayn midab ama caddaan ah rhombic crystalline. Ma jiro wax ur ah, dhadhan yar oo qadhaadh, ka dib dareenka suuxdinta. Beddel midabka nalka. Ku milmi karin biyaha, xoogaa ku milmi kara saliida dufanka, kuna milmi kara acid aashitada, ethanol, ether, chloroform, saliid yicib, saliid saytuun ah. Saamaynta muddada dheer, sunta yar. Waxaa badanaa loo isticmaalaa yareynta xanuunka cudurada maqaarka, dhaawacyada, babaasiirta iyo boogaha. Shirkadaha cinjirka qaarkood waxay ku daraan cinjirka 'benzocaine' cinjirka galmada si loo yareeyo biyo baxa ragga xilliga galmada.
Benzocaine, oo lagu iibiyo magaca calaamadda Orajel iyo kuwa kale, waa suuxdinta maxalliga ah ee loo yaqaan 'ester maxaliga ah' oo badanaa loo isticmaalo sida xanuun joojiye ama dhibco qufac ah. Waa walaxda firfircoon ee ku jirta boomaato badan oo daawada suuxdinta la iska iibsado sida wax soo saarka boogaha afka. Waxaa sidoo kale lagu daraa antipyrine si loo sameeyo dhibcaha A / B otic si loo yareeyo xanuunka dhagaha loona saaro dhego-beelka.
Benzocaine waa daawo suuxin ah (daawo kabuubisa). Waxay ku shaqeysaa iyadoo laga joojinayo calaamadaha neerfaha ee jirkaaga.
2) Codsiga benzocaine
Maadada loo yaqaan 'Benzocaine' ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka ama raaxo la'aanta ay keento cuncunka maqaarka ee yar, cunaha oo xanuuna, qoraxdu dhacdo, cuncunka xubinta taranka haweenka ama malawadka, caguhu soo baxayaan, babaasiirta, iyo ilo kale oo badan oo xanuun yar oo jidhka dushiisa ah. Benzocaine waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu kabuubiyo maqaarka ama dusha sare ee gudaha afka, sanka, cunaha, xubinta taranka haweenka, ama malawadka si loo yareeyo xanuunka la gelinayo qalab caafimaad sida tuunbo ama shaybaar.
Mawduucyada 'Benzocaine' waa in aan loo isticmaalin in lagu daaweeyo xanuunka ilko-baxa ee carruurta yaryar, loomana oggola in loo isticmaalo cunug ka yar 2 sano jir. Waxaa jira noocyo iyo noocyo badan oo maadada benzocaine ah oo la heli karo. Noocyada oo dhan kuma qorna buugyarahan
Mawduucyada 'Benzocaine' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin aan ku xusnayn tilmaamahan dawada.
3) COA ee benzocaine
Alaabada Tijaabada Faahfaahinta Natiijooyinka Imtixaanka
Muuqaal Kiristaalo cad ama budada kareem cad Waafaqsan
Aqoonsiga ABE. Waxay umuuqataa falcelin togan
Barta dhalaalida 154degree ~ 158degree 154degree ~ 157degree
Acid PH 5.0 ~ 6.5 PH = 5.9
Muuqaalka xalka Cad oo aan midab lahayn Waafaqsan
Khasaare ku saabsan qalajinta ≤0.5% 0.07%
Biraha culus .0000.0005% Waafaqsan
Maaddooyinka la xiriira ≤0.05% Waafaqsan
Dambas jilicsan ≤0.1% 0.05%
Assay (oo ku saleysan qallalan) 99.0-101.0% 99.87%
Gunaanad U hoggaansanaanta BP200
Hore: Daawooyinka xoolaha Tetramisole hydrochloride cas 5086-74-8
Xiga: 99% Lidocaine Hydrochloride / Lidocaine HCl CAS 73-78-9